३४ उपसचिवको सरुवा, को-कहाँ पुगे ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
३४ उपसचिवको सरुवा, को-कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३४ उपसचिवको सरुवा गरेको छ । उनीहरूको स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
अधिकांशलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस किन रोकियो कर्मचारी समायोजन पक्रिया ? कारण यस्तो छ
ट्याग्स: उपसचिव, सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सरुवा